Umalusi Omnyama WaseJalimane: Umhlahlandlela Kule Nja Engajwayelekile - Izinhlobo
Imibuzo Evame Ukubuzwa Yizinja
Ukuqeqeshwa Kwezinja, Okufakiwe
Umalusi Omnyama WaseJalimane: Umhlahlandlela Kule Nja Engajwayelekile
Wake wambona uMalusi Omnyama waseJalimane?
Uma kungenjalo, zikhona! Futhi le canine ingukuthi unesibindi, uqotho futhi uhlakaniphile . Ngakho-ke yini ebenza bahluke?
Yingakho sidale lolu lwazi lohlobo lweBlack Shepherd. Ake sithole ukuthi umbala wabo ukuphela kwento ebenza bahluke kuleyo ejwayelekile.
Bavelaphi abelusi abamnyama baseJalimane?
Ungabona kanjani uMalusi Omnyama?
Ingabe umbala weBlack Shepherd uyabuthinta ubumnene bawo?
Ukunakekela uMalusi Omnyama
Ngabe abelusi abaMnyama baseJalimane bayinzalo enempilo?
Malini umdlwane omnyama waseJalimane omnyama?
Ngingamtholaphi uMalusi Omnyama waseJalimane?
Ingabe sekuyisikhathi sokuletha ekhaya uMalusi Omnyama waseJalimane?
UMalusi Omnyama waseJalimane noma uMalusi Omnyama ngu hhayi uhlobo oluhlukile. Zingama-purebred Abelusi BaseJalimane ngombala omnyama oqinile.
Ngisho neAmerican Kennel Club (AKC) iyazibona futhi iyazifaka kwi-German Shepherd ukuzala okujwayelekile .
Umlando walolu hlobo lwaqala eJalimane, yingakho igama. Zivela emgqeni wemigqomo ehlukene yokwalusa efana neBerger Picard, ngenhloso yokwenza yona izinja ezisebenza kangcono .
Ngawo-1900, uMalusi waseJalimane wafika eMelika. Uhlobo lwaluthola ukuthandwa, kepha lwancishiswa iMpi Yezwe Yokuqala. Igama elithi 'isiJalimane' laba yinto engekho, ngakho baphinde baqanjwa kabusha I-American Alsatian noma inja kaMelusi.
Emashumini eminyaka kamuva, bamukelwa ngisho negama elithi German Shepherd kwazise abantu bahlaba umxhwele ngamakhono abo. Bangasebenza njengomngane womndeni omuhle kakhulu kanye nenja esekela abantu abakhubazekile.
Uma wake wahlangana ubuso nobuso noMalusi Omnyama, umuzwa wakho wokuqala kungaba ukuthi ubaleke ngoba abukeka njengempisi. Ungakhathazeki; kukhona okunye ukuthanda kunokwesaba kusuka ezicini ezinhle ze-canine.
IBlack German Shepherd inobuso obuqoshiwe nomlomo omude. Okubhalwe ebunzini labo eliyindilinga kungokwabo okucacisiwe futhi izindlebe eziqondile .
Abanye abelusi baseJalimane abaneminyaka eyi-16 kuya kwengama-20 ubudala banezindlebe ezi-floppy. Kepha uma uqwanga luba lukhuni, indlebe yabo iyoba lukhuni futhi ime mpo.
Lezi zinja zinomnyama amehlo amile okwe-alimondi ezihambisana nekhala labo elimnyama .
Bane- kwemisipha umzimba ngemilenze eqinile futhi eminyene. IBlack German Shepherd inemhlane oqonde ngqo ogcina ngo- onamahloni umsila . Kwesinye isikhathi bavame ukuba ne- iqonde ngqo emuva ukwedlula ejwayelekile.
IBlack Shepherd inengubo ephindwe kabili yobude obumaphakathi - ungqimba oluminyene futhi oluqondile olungaphandle olunengubo yangaphansi ethambile.
Lezi zinja zingathola izinwele ezinde, oku-wavy kancane futhi oku-fluffy. Imvamisa, bane- ijazi elide noma eliqondile kunoMalusi waseJalimane ojwayelekile.
Kepha noma ngabe ubude bejazi labo, le canine inombala owodwa oyinhloko, mnyama .
Ukuze uMalusi waseJalimane abe mnyama, bobabili abazali bakhe kumele babe nesakhi sofuzo sejazi elimnyama. Indlela eqiniseke ngokwengeziwe yokukhiqiza le canine engavamile ukuzalanisa abelusi ababili abaMnyama.
Ngabe abelusi abaMnyama baseGerman bayashintsha umbala noma banezimpawu ezimhlophe?
Uma uqaphela inja yakho iba nsundu noma ithola izinwele ezimhlophe, akayena uMalusi Omnyama kepha uvame ukuba njalo. Imidlwane emnyama yase-German Shepherd ivame ukuphuma ibe mpunga, imnyama, noma imhlophe bese ithola umbala wayo omdala inamasonto ayisishiyagalombili ubudala. Bahambise ekhaya benamasonto ayisishiyagalolunye kuya kwayishumi ubudala ukuze baphephe.
Abanye abelusi abaMnyama bangaba nezimagqabhagqabha ezimhlophe noma ezinsundu ezinqeni zabo, emilenzeni noma esifubeni. Kunezimo lapho kuba mnyama njengoba bekhula, kepha kungahlala futhi.
Amabala amhlophe akusho ukuthi le nja ayiyona i-purebred ngoba kuvamile kwabanye abaMelusi baseBlack German ukuba nabo.
Uma ukhathazekile ukuthi ukumakwa kungasho ukuthi kuyingxube, cela umfuyi wamaphepha ukuthi aqiniseke ukuthi uletha ekhaya i-Black German Shepherd emsulwa.
Bangakanani abelusi abamnyama baseJalimane abathola?
Ziyi- inja enkulu ekhula ibe ngosayizi ofanayo noma ibe nkulu kakhulu ukwedlula abelusi abajwayelekile baseJalimane.
Indoda endala eyeduna iBlack German Shepherd inokuphakama phakathi Amasentimitha angama-24 kuya kwangu-26 (61 kuya ku-66 cm). Izinsikazi zincane ngosayizi kusuka ku Amasentimitha angama-22 kuya kwangu-24 (56 kuya ku-61 cm).
Abesilisa banesisindo esimaphakathi phakathi Amakhilogremu angama-65 kuya kwangu-90 (29 kuye ku-41 kg) ngenkathi owesifazane esesohlangothini olulula, enesisindo Amakhilogremu angama-50 kuye kwangama-75 (23 kuya ku-34 kg).
Abelusi Abancane Abamnyama baseJalimane bavuthiwe futhi bafinyelela usayizi wabo okhule ngokugcwele phakathi kwezinyanga eziyi-18 kuye eminyakeni emibili ubudala.
Ukuphela kwendlela umbala othinta ngayo iBlack German Shepherd kungukuthi ubenze babukeke beteleka kakhulu. Banefayela le- ubuntu obufanayo njenganoma imuphi umalusi waseJalimane ojwayelekile oyinja enkulu yokusebenza neyomndeni.
Inja eyodwa, imisebenzi ehlukene
Abamnyama Abelusi banezimfanelo ezingabenza bakulungele ukwenza umsebenzi wamaphoyisa, ezempi, nethimba lokusesha nokuhlenga. Namuhla, babalwa njenge- inja yesibili ethandwa kakhulu e-US.
Eqinisweni, uvame ukubona abelusi baseJalimane besetshenziswa ngamasosha namaphoyisa njengophiko lwabo lwe-K9. Lezi zinja zikhona abesabi, bahlakaniphile, futhi bayalalela , okubenza babe ngabazongenela ukhetho olukhulu kulezi zikhundla.
Noma le canine ilingana nezibhamu nasemhlabeni wobugebengu, bangaqeqeshwa futhi ukuze babe inja yesevisi .
IBlack German Shepherd ine- esitebeleni ubumnene, okusho ukuthi bangakwazi ukuma ezimweni ezinzima ngaphandle kokukhathazeka. Ibavumela ukuthi babe ngabaqaphi, umholi ongaboni, nomngane osiza abantu abakhubazekile.
Ngokubukeka kwabo okufana nempisi nemvelo evikelayo, lolu uhlobo ongathembela kulo ukuthi luyamangalisa izinja eziqaphile . Isibindi sabo kanye nokuqapha kubavumela ukuba banakekele abathandekayo babo ngenkathi beyi umngane womndeni omuhle kakhulu .
Ukwengeza okuhle emndenini
Abelusi abaMnyama baseJalimane bangabukeka benolaka, kepha banamandla kakhulu onothando nobungane . La ma-hound aqotho ayizinja ezinkulu zomndeni futhi azongena nezinhlobo ezahlukahlukene zemindeni.
Ziyaziwa ukuthi zikhona kuyahlekisa , okuyisici esibasiza ukuba bazwane nezingane noma nentsha. IBlack Shepherd nayo ingaba nendawo ethambile yamakati noma ezinye izilwane ezifuywayo lapho inikezwa uqeqesho lokuxhumana nabantu lapho isencane.
Bheka le vidiyo ehlekisayo ye-YouTube yoMalusi Omnyama waseJalimane owenza okutshekisa kwekhanda ngomsindo wengane ekhalayo:
Kodwa-ke, lezi zinja zikude, futhi ngenxa yemvelo yazo yokubuka izinja, zizoxwaya abantu ezingabazi.
IBlack German Shepherd iyi- inja esebenzayo , inkulu kulabo abathanda ngaphandle. I-canine ezalwa ngumhlambi, uhlobo lwazo luza nayo isivinini, isinyenyela, nokushesha .
Lezi zinja zinejubane eliphezulu lokugijima le- 30 mph noma ama-48 km / h nokuphakama kokuxhuma kwe- 5 izinyawo noma amamitha ayi-1.5. Qiniseka ukuthi wakha izindonga noma uthango olungaphezulu kwamamitha ayisithupha noma amamitha amabili ukuphakama egcekeni lakho ukuvimbela ukuthi bangaphunyuki.
Le canine idinga okungenani ihora lokuzivocavoca nsuku zonke. Ukugijima noma ukuhamba ibanga elide kuzokwanela, yize bezothokozela nokubhukuda echibini noma uhambo olufushane. Bangathanda futhi ukuchitha isikhathi esiningi nawe kwazise bathanda ukunakwa futhi abafuni ukuba bodwa isikhathi eside.
Ngaphandle kwemisebenzi yomzimba, kunempilo ukuhlinzeka inja yakho nokuzivocavoca kwengqondo.
Esikhundleni sokulanda ibhola okwejwayelekile epaki noma egcekeni, kwenze kube inselele ngokubacela ukuthi balande into ethile enjengokuthiyizi noma iphephandaba.
Unenhlanhla ngawe, uMlusi Omnyama unjalo kulula ukuqeqesha ngoba bahlakaniphile futhi banesifiso sokujabulisa inkosi yabo.
Ngisemncane, qala ngo- ukuqeqeshwa kokulalela nokugqekeza. Noma ngabe bazohlala ngaphakathi kwendlu noma indlu evulekile yezinja abangahamba kuyo, kufanele bazi ukuthi kumele baziphathe kanjani.
Lezi zinja kumele futhi ziqale ukuzibandakanya kwabo ngesikhathi sesigaba sabo semidlwane. IBlack Shepherd idinga ukufunda ukusebenzisana nomndeni wakho nabangane, nokuthi ihlukaniswe kanjani iposi elinobungane kumuntu ongamazi oyisongo.
Ngesikhathi sokuqeqeshwa, zibeke njenge- ukuthanda i-alpha , eqinile kepha inikeza abaphathi nemivuzo. Nge ukungaguquguquki nokuqiniswa okuhle , le canine izokwazi ukuthatha izifundo.
Ngabe ubunzima bokunakekela inja buyakhula ngosayizi wazo? Kuya ngesikhathi sabo sokuchitha, ijazi, noma uma kukhona, izindaba zezempilo.
Noma uyinja enkulu, uzothola iBlack Shepherd a okuphansi yesondlo isilwane .
Uhlelo lwakho lokuzilungisa omnyama
Inani lezikhathi odinga ukuzixubha ngalo ijazi lincike ebude. Uma iBlack Shepherd yakho idlala ukubukeka kwezinwele ezinde, udinga ukuwahlanganisa kanye ngosuku . Uma benobude obumaphakathi, ungakwenza kabili kuya kathathu ngesonto .
Okwabo isikhathi sokugeza , kanye njalo ngenyanga noma ezimbili kwanele. Kungcono ukubageza kuphela uma kunesidingo ngoba okuningi kuzomisa isikhumba sabo.
Le canine nayo ijwayele ukutheleleka endlebeni, ngakho-ke qiniseka ukuthi uhlola futhi hlanza izindlebe zabo kanye noma kabili ngenyanga .
Ngenkathi ukuwo, nquma izinzipho zabo kanye ngenyanga ukuqinisekisa ukuthi ayikho ifenisha yakho noma obathandayo abalimala.
Ukugcina ukubukeka kwabo kwe-German Shepherd, kubayise kusikhombisi kabili noma kathathu ngonyaka yokugunda izinwele nokuhlanza okujwayelekile.
Ngabe abelusi abaMnyama baseJalimane bayachitha?
Yebo, abelusi abamnyama noma abajwayelekile baseJalimane bayachitha. Bangabahlaseli abanzima noma ngabe yisiphi isizini. Kusamele uqaphele intwasahlobo nokuwa ngoba bashaya ingubo yabo yangaphansi. Kungcono ukuba nomshini olungele ukusindisa umndeni wakho ekubhukudeni izinwele.
Abanye bathi abelusi abanezinwele ezinde baseJalimane bachitha kancane. Kepha noma iyiphi ingubo abayitholayo, abayona i-hypoallergenic.
Ngaphandle kokuchithwa, lezi zinja zingakwazi ukuzivumelanisa kalula nezindawo ezahlukahlukene nezimo zezulu.
Yini okufanele ayidle uMalusi Omnyama waseJalimane?
Yondla inja yakho izinkomishi ezimbili kokudla kwenja okusezingeni eliphakeme ngosuku . Umuntu Omdala Omnyama udinga amakhalori angama-20 ngesisindo ngasinye.
Kwabasebasha, hlinzeka izinkomishi ezine kokudla komdlwane ukuqinisekisa ukukhula okufanele.
Lapho ufuna umkhiqizo noma uhlobo, khetha ukudla kwenja okuqukethe amafutha namaprotheni ngoba kubalulekile ekuthuthukiseni lolu hlobo.
Abelusi abaMnyama baseJalimane badinga ukudla okunamaprotheni amaningi ukusiza ekukhuleni nasekululameni kwemisipha yabo. Amafutha ahlinzeka ngamandla futhi enza ijazi lawo libukeke liphilile.
Njengoba inja ngayinye inezidingo zayo zokudla okunempilo ngokuya ngempilo yabo, imetabolism, kanye namazinga womsebenzi, akukho okubi ekubuzeni kudokotela wezilwane wakho.
Abelusi abaMnyama baseJalimane ngokuvamile banempilo, kodwa ukuba nombala omnyama oqinile akubakhululi ezinkingeni zempilo ezivamile zohlobo lwabo. Le canine isengozini yezifo ezilandelayo:
Elbow futhi I-Hip Dysplasia
Izifo zomgogodla ezifana ne-Degenerative Spinal Stenosis ne-Chronic Degenerative Radiculomyelopathy
Isifo sikaVon Willebrand
Ukungasebenzi kahle kwe-Exocrine Pancreatic
Ngokunakekelwa okufanele nothando oluningi, uBlack Shepherd angakwazi ukukhulisa impilo yakhe Iminyaka engu-10 kuya kwengu-13.
Umalusi waseJalimane usayizi kadoti ongu- 4 kuya ku-9 imidlwane . Ungathola injana ejwayelekile ngentengo yama- $ 300 kuye ku- $ 1,000, kepha emnyama izobiza kabili.
Njengoba kungebona bonke abelusi baseJalimane abanesakhi sofuzo sejazi elimnyama, ukukhiqiza iBlack Abelusi akuvamile ukwenzeka. Imidlwane emnyama yase-German Shepherd ibiza malini $ 800 kuya ku- $ 2,000 .
Lapho uthola umdlwane omnyama, qiniseka ukuthi uletha ekhaya okulungile. Lemidlwane iphuma imnyama, mhlophe, noma mpunga futhi isazoshintsha umbala ize ibe neminyaka eyisishiyagalombili ubudala. Cela amaphepha okuzalwa uthathe ikhaya elilodwa kuphela ngemuva kokuba sebemnyama bese beba namasonto ayishumi ubudala .
Kepha indlela eqinisekile yokuthatha inja elungile iye ekhaya ukuyithola kudoti waseBlack German Shepherd. Zingahle zibize imali ethe xaxa, kepha okungenani ngeke umangale ukuthola umdlwane sable embhedeni wakho.
Ukukusiza ukuthi uthole umdlwane wakho, senze uhlu lwabafuyi beBlack German Shepherd ongawahlola.
UKennel von Wiese (ENyakatho Carolina)
Ipulazi Elimnyama Elimnyama (ENew Hampshire)
Abelusi Abamnyama Abakhulu BaseJalimane (Maine)
UNarnia Kennels (Ontario)
Abanye abelusi abaMnyama bashiywa noma bashiywe ezindaweni zokukhosela. Uma ukhetha inja endala (kanye nendlela eqinisekile yokuthola yonke inja emnyama), nazi izikhungo zokutakula nezingosi zokutholwa ongazihlola:
Bay Area Ukuhlangulwa Komalusi WaseJalimane (ECalifornia)
Ukusindiswa Kwabelusi BaseWestide (Izingelosi)
Konke Ukutakula Kamalusi (EMaryland)
Ukutakulwa Kwezamalusi waseVirginia (EVirginia)
Ukusindiswa Komalusi WaseMissouri waseJalimane (EMissouri)
Noma ngabe uthola iBlack Shepherd kumfuyi noma esikhungweni sokutakula, kufanele njalo buza ngempilo womdlwane wakho nabazali. Umfuyi oziphethe kahle uzokwazi ukukunikeza imininingwane futhi uzobuza imibuzo ngawe ukuqinisekisa ukuthi injana izongena empilweni yakho.
Futhi, lapho uthola inja endala, buza ukuthi ngabe ibinokuqeqeshwa yini noma cha ukuzilungiselela noma ukuba nochwepheshe wokuziqeqesha.
Uma uhlela ukuthatha uqeqesho lwabo, kuzosiza ukwakha ubudlelwano bakho ngoba uzochitha isikhathi esiningi ne-canine yakho entsha.
Ngaphambi kokuthola inja, kufanele uqiniseke ukuthi luhlobo olufanele wena futhi uma usukulungele ukuthatha umthwalo.
UMalusi Omnyama unjalo okulula ukuqeqesha futhi a ukunakekelwa okuphansi isilwane, silungele abanikazi bezinja okokuqala ngqa. Uma uthathe isinqumo ngale canine enhle futhi engavamile - uzobe uthola inhlanganisela ye- onesibindi, okhaliphile , futhi qotho .
Kepha lolu hlobo alugcini ngokubukeka ngobuqili; bangakwazi ukuqhubeka izinhlobo ezahlukene zemisebenzi . Bangaba yinja yamaphoyisa engenasibindi noma inja yensizakalo ethembekile.
Bazojabula futhi njengesilwane sasekhaya. Kepha uzodinga ukwenza isikhathi sabo kusukela kulolu hlobo akathandi ukuba yedwa nentando kudinga ihora yokuzivocavoca nsuku zonke.
Ukuthola uMalusi waseJalimane onombala omnyama ongajwayelekile kungenzeka ngentengo , kodwa kunjalo kuwufanele it.
Ingabe usuvele ungumnikazi we-Black German Shepherd? Singathanda ukuzwa ngokuhlangenwe nakho kwakho nalesi sidalwa esimangalisayo. Yabelana ngawo nawo wonke umuntu esigabeni sokuphawula ngezansi.
Imininingwane ye-Pitbull Mastiff Mix Breed Information: Isimo, Izithombe Nosayizi
Uma ufuna i-Chocolate Lab, yilokhu okudingeka ukwazi
Ukuqeqeshwa Kwabelusi BaseJalimane: Umhlahlandlela Wabanikazi Abasha (enezithombe)
Amagama ama-Husky angama-500 +: Uhlu Oluphelele Kunazo Zonke Ozoluthola
IShetland Sheepdog Dog Inzala Imininingwane
Uhlu oluphelele lwazo zonke izinja ezinamahloni: Zonke eziyi-14 zazo
Ulwazi lwe-Goldendoodle Breed Information, Temperament, Puppies & Izithombe
I-Chihuahua Terrier Mix - Kunjani Ukuba Nomnikazi
Udinga ukubona le mibala emi-4 ekhazimulayo yeGolden Retriever
Amaqiniso ayi-7 odinga ukuwazi ngaphambi kokusebenzisa i-Fox Red Lab
Ukukhetha Ukuzala Inja
ingxube ye-pitbull chihuahua ikhule ngokugcwele
I-english cocker spaniel poodle mix
umehluko phakathi kwamalebhu nokubuyisa kwegolide
amagama amahle kakhulu ezinja zokuzingela zabesilisa
umalusi wase-australia blue heeler mix info